बागलुङबाट श्रीमतीको चर्तिकला बुझ्न ससुराली गएका धनबहादुरको यसरी गयो ज्यान ! – ebaglung.com
२०७५ भाद्र २२, शुक्रबार १०:११	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
प्रेम सुनार , गुल्मी २०७५ भदौ २२ । अर्घाखाँचीमा फेसबुकबाट माया प्रेम बस्न गएका एक प्रेमीले बिदेशबाट सिधै प्रेमिकाको घरमा आई उनका श्रीमानको हत्या गरेका छन । गत सोमबार सन्धिखर्क नगरपालिका–१२ बस्यालटोला नजिकै टाउको काटिएको अवस्थामा बोरामा फालेको अबस्थामा भेटिएको शवको पहिचान हुने क्रममा यस्तो रहश्य खुलेको हो ।
सन्धिखर्क १२ बस्याल टोलाको चिलीयाथुम खोल्सामा भेटिएको शव कपिलबस्तु वाणगंगा नगरपालिका वडा नम्वर ७ धैरेनीडाडाका ३६ बर्षिय धनबहादुर घर्ती मगरको रहेको पुष्टी जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाचीले गरेको हो ।
डिभर्ना बस्याल टोलाका महिलाहरु खर्यानमा घाँस काट्न गएको समयमा गन्ध आएपछि के मरेछ भनेर खोज्दै जादा स्थानीयहरुले अनुहारनै नचिनिने अबस्थामा मानसिको शव देखेका थिए । मानिसको शव देखेपछि स्थानीयहरुले प्रहरीलाइ खबर गरेका थिए । बेवारिसे शव भेटिए पछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । बेवारिसे शव भेट्टिएको २ दिन पछि कपिलवस्तुको बाँणगंगा ७ धैरेनीडाँडा बस्ने ३६ बर्षको धनबहादुरको हुन सक्ने भन्दै मंगलबार राती श्रीमती राधा घर्ती मगर जिल्ला अस्पतालमा आएर शव हेरिन । शव हेरेपछि मेरो श्रीमानको शव हैन भनेर राधा फर्किइन । प्रहरीले राम्रो संग हेर्नुस हुन सक्छ भन्दा मेरो श्रीमानलाइ मैले भन्दा अरु कसले चिन्न सक्छ ? उनले भनिन्, यो शव मेरो श्रीमानको हैन । आफ्नो श्रीमानको लास नभएको भन्दै राती नै राधा घर फर्केकी थिईन ।
राधा र रमेशको प्रेम फेसबुक र भाइबरबाट सुरु भयो । रमेश विदेशबाट घर फर्कीए पछि आफनो घर नगइ भदौ १० गते रुकुम घर बताउने रमेश विक बिदेशबाट राधाको घरमा आए । उनी राधा संगै राधाको घरमा तीन दिन बसे । उता कपिलवस्तु बाँणगंगा ७ धैरेनीडाँडा निवासी ३३ बर्षिय राधा घर्तिमगरको श्रीमान ३६ बर्षका धन बहादुर घर्तिमगर कामको सिलसिलामा बागलुङ गएका थिए ।
सोही मौका छोपी राधा, राधाकी आमा र रमेश तीन जना भएर कपिलवस्तुबाट अर्घाखाँचीको यात्रा तय गरे । सन्धिखर्कबाट ट्याक्सी चढेर राधाको माइती सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्वर १२ डिभर्नाको बस्याल टोला पुगे ।
दशैमा घर आउँछु भनेर बागलुङ गएका राधिकाका श्रीमान धन बहादुर घर्तिमगर अचानक घर आए । तर श्रीमतीलार्इ देखेनन । श्रीमतीलाई नदेखेपछि फोन गरे । फोनमा किन नभनि माइती गएको भनेर कुराकानी भयो । कुराकानीकै क्रममा वादविवाद भयो । त आउने कि म आम भनेर चर्काचर्की भयो । राधाले तपाई आउन पर्दैन । भाडा छैन । म भोलि आउछु भनेर भनिन । फोनमा भनाभन पछी कुराकानी सकियो ।
अर्घाखाँची गुल्मी बागलुङ
बडीगाड-७ को ठुलो भ-याङ खण्डमा ९ दिन सम्म दिनको ९ घण्टा मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुने !
बडीगाड- ५ को खौलार बजारमा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न !